၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားကို လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများ
12 Oct 2017 . 3:38 PM
၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲကာလဟာ နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ပြီးဆုံးတော့မှာပါ။ စောစောစီးစီးခြေစစ်ပွဲအောင်သွားတဲ့ (၂၂) သင်းလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့သလို အိမ်ပြန်လက်မှတ်ရသွားတဲ့ အသင်းတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေ အစုံအလင်ပါနိုင်ပါ့မလား၊ ခြေစစ်ပွဲရော အောင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့လို့ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားကို လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
၁။ ဂါးရက်ဘေးလ် (Gareth Bale)
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ တောင်ပံတိုက်စစ်မှူး ဂါးရက်ဘေးလ် (Gareth Bale) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပါဝင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောက်တိုဘာလ (၉) ရက်နေ့တုန်းက ဂါးရက်ဘေးလ် ဦးဆောင်တဲ့ ဝေးလ်အသင်းဟာ အိုင်ယာလန်အသင်းကို ၁ဂိုး – ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ဖလားအိပ်မက် အသက်မဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဝေးလ်အသင်းဟာ အိုင်ယာလန်အသင်းကို သရေကစားခဲ့ရင်တောင် Play – Offs နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားတက်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။
ဂါးရက်ဘေးလ် (Gareth Bale)
၂။ အာဂျန်ရော်ဘင် (Arjen Robben)
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလပ်နဲ့ နယ်သာလန်လက်ရွေးစင်အသင်းတို့ရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး အာဂျန်ရော်ဘင် (Arjen Robben) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြေစစ်ပွဲမှာ နယ်သာလန်အသင်းဟာ ဆွီဒင်အသင်းနဲ့ ရမှတ်တူခဲ့ပေမယ့် ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် ရုရှားလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိသေးပေမယ့် ခြေစစ်ပွဲမအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရော်ဘင်ဟာ (၃၃) နှစ်အရွယ်မှာပဲ နိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ဘဝမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။
အာဂျန်ရော်ဘင် (Arjen Robben)
၃။ အလက်ဆစ်ဆန်းချက် (Alexis Sánchez)
ဂါးရက်ဘေးလ်၊ အာဂျန်ရော်ဘင်တို့နဲ့အတူ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ လွဲချော်ရမယ့် တခြားနာမည်ကျော်ကစားသမားကတော့ ချီလီတိုက်စစ်မှူး အလက်ဆစ်ဆန်းချက် (Alexis Sánchez) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလက်ဆစ်ဆန်းချက် ဦးဆောင်ကစားနေတဲ့ ချီလီအသင်းဟာ ပီရူးအသင်းနဲ့ ရမှတ်တူပေမယ့် ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားအိပ်မက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
အလက်ဆစ်ဆန်းချက် (Alexis Sánchez)
၄။ အာတူရိုဗီဒယ် (Arturo Vidal)
ချီလီအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမား အာတူရိုဗီဒယ် (Arturo Vidal) ဟာလည်း ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ ချီလီအသင်းကို ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ဘဝမှ အကောင်းဆုံးထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ခြေစစ်ပွဲမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် အသက် (၃ဝ) သာရှိသေးတဲ့ ဗီဒယ်ဟာ သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့က ပါရာဂွေးအသင်းကို ၃ဂိုး – ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာလက်ရွေးစင်ဘဝမှ အနားယူပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ချီလီကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဗီဒယ်ကို လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ ဆက်လက်တွေ့နိုင်မလားဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြစို့ရဲ့။
အာတူရိုဗီဒယ် (Arturo Vidal)
၅။ အန်တိုနီယိုဗလင်စီယာ (Antonio Valencia)
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလပ်နဲ့ အီကွေဒေါအသင်းတို့ရဲ့ ညာတောင်ပံကစားသမား အန်တိုနီယိုဗလင်စီယာ (Antonio Valencia) ကိုလည်း ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗလင်စီယာ ကစားနေတဲ့ အီကွေဒေါအသင်းဟာ တောင်အမေရိကန်ဇုန်ခြေစစ်ပွဲမှာ အဌမနေရာသာ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားဝင်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗလင်စီယာရဲ့ခြေစွမ်းတွေကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာသာ ဆက်လက်ရှုစားကြစို့ရဲ့။
အန်တိုနီယိုဗလင်စီယာ (Antonio Valencia)
၆။ ဒေးဗစ်အယ်လာဘာ (David Alaba)
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကလပ်မှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဒေးဗစ်အယ်လာဘာ (David Alaba) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သြစတီးယားအသင်းနဲ့ ပါဝင်ကစားနေတဲ့ ဒေးဗစ်အယ်လာဘာဟာ ခြေစစ်ပွဲမအောင်ခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို တီဗွီကနေပဲ အားပေးရတော့မှာပါ။
ဒေးဗစ်အယ်လာဘာ (David Alaba)
ဒါ့အပြင် ဘော့စ်နီးယားတိုက်စစ်မှူး အီဒင်ဒီဇီကို (Edin Dzeko) ၊ နယ်သာလန် ကွင်းလယ်ခံစစ် ဒါလေဘလိုင်း (Daley Blind) ၊ စလိုဗေးနီးယား ဂိုးသမား ဂျန်အော့ဘလက် (Jan Oblak) နဲ့ အမေရိကန် ဂိုးသမား တင်ဟောင်းဝဒ် (Tim Howard) နာမည်ကျော်တွေကိုလည်း ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အီဒင်ဒီဇီကို (Edin Dzeko)
နောက်ပြီးတော့ ခရိုရေးရှား ကွင်းလယ်လူ လူကာမိုဒရစ် (Luca Modric) ၊ ခရိုးရေးရှား ကွင်းလယ်လူ အီဗန်ရာကီတစ် (Ivan Rakitic) ၊ အီတလီဂိုးသမား ဘူဖွန် (Buffon) ၊ အီတလီနောက်ခံလူ ချီလီနီ (Chiellini) တို့လို နာမည်ကျော်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းတွေက အုပ်စုဒုတိယနေရာသာ ရခဲ့တဲ့အတွက် Play – Offs မှာ အနိုင်ရမှသာ ခြေစစ်ပွဲအောင်မှာမို့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ တွေ့မြင်ရဖို့ ၅ဝရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ် ၂ဝ၁၈ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်ကစားသမားက ခြေစွမ်းပြမယ်ထင်လဲ။
၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားကို လှဲခြျောခဲ့ရတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားမြား
၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲကာလဟာ နိုဝငျဘာလ (၁၄) ရကျနမှေ့ာ ပွီးဆုံးတော့မှာပါ။ စောစောစီးစီးခွစေဈပှဲအောငျသှားတဲ့ (၂၂) သငျးလညျး ထှကျပျေါခဲ့သလို အိမျပွနျလကျမှတျရသှားတဲ့ အသငျးတှလေညျး ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ နာမညျကြျောကစားသမားတှေ အစုံအလငျပါနိုငျပါ့မလား၊ ခွစေဈပှဲရော အောငျကွရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခှနျးကလညျး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးပါတယျ။ ခွစေဈပှဲမအောငျခဲ့လို့ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားကို လှဲခြျောခဲ့ရတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှကေို ဖျောပွလိုကျရပါတယျ။
၁။ ဂါးရကျဘေးလျ (Gareth Bale)
ရီးရဲလျမကျဒရဈအသငျးရဲ့ တောငျပံတိုကျစဈမှူး ဂါးရကျဘေးလျ (Gareth Bale) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပါဝငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ အောကျတိုဘာလ (၉) ရကျနတေု့နျးက ဂါးရကျဘေးလျ ဦးဆောငျတဲ့ ဝေးလျအသငျးဟာ အိုငျယာလနျအသငျးကို ၁ဂိုး – ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့ဖလားအိပျမကျ အသကျမဲ့ခဲ့ရပါတယျ။ ဝေးလျအသငျးဟာ အိုငျယာလနျအသငျးကို သရကေစားခဲ့ရငျတောငျ Play – Offs နဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားတကျခှငျ့ရှိပါသေးတယျ။
ဂါးရကျဘေးလျ (Gareth Bale)
၂။ အာဂနျြရျောဘငျ (Arjen Robben)
ဘိုငျယနျမွူးနဈကလပျနဲ့ နယျသာလနျလကျရှေးစငျအသငျးတို့ရဲ့ ဂန်တဝငျကစားသမားကွီး အာဂနျြရျောဘငျ (Arjen Robben) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ မွငျတှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ခွစေဈပှဲမှာ နယျသာလနျအသငျးဟာ ဆှီဒငျအသငျးနဲ့ ရမှတျတူခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ ရုရှားလကျမှတျ ပြောကျဆုံးခဲ့ရပါတယျ။ အကောငျးဆုံးအနအေထားမှာ ရှိသေးပမေယျ့ ခွစေဈပှဲမအောငျဖွဈခဲ့တဲ့ ရျောဘငျဟာ (၃၃) နှဈအရှယျမှာပဲ နိုငျငံတကာလကျရှေးစငျဘဝမှ အနားယူခဲ့ပါတယျ။
အာဂနျြရျောဘငျ (Arjen Robben)
၃။ အလကျဆဈဆနျးခကျြ (Alexis Sánchez)
ဂါးရကျဘေးလျ၊ အာဂနျြရျောဘငျတို့နဲ့အတူ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ လှဲခြျောရမယျ့ တခွားနာမညျကြျောကစားသမားကတော့ ခြီလီတိုကျစဈမှူး အလကျဆဈဆနျးခကျြ (Alexis Sánchez) ပဲဖွဈပါတယျ။ အလကျဆဈဆနျးခကျြ ဦးဆောငျကစားနတေဲ့ ခြီလီအသငျးဟာ ပီရူးအသငျးနဲ့ ရမှတျတူပမေယျ့ ဂိုးကှာခွားခကျြကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားအိပျမကျပကျြစီးခဲ့ရပါတယျ။
အလကျဆဈဆနျးခကျြ (Alexis Sánchez)
၄။ အာတူရိုဗီဒယျ (Arturo Vidal)
ခြီလီအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျကစားသမား အာတူရိုဗီဒယျ (Arturo Vidal) ဟာလညျး ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ မွငျတှရေ့တော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲမှာ ခြီလီအသငျးကို ကှငျးလယျဖနျတီးရှငျဘဝမှ အကောငျးဆုံးထိနျးကြောငျးနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ခွစေဈပှဲမအောငျမွငျခဲ့တဲ့အတှကျ အသကျ (၃ဝ) သာရှိသေးတဲ့ ဗီဒယျဟာ သွဂုတျလ (၃၁) ရကျနကေ့ ပါရာဂှေးအသငျးကို ၃ဂိုး – ဂိုးမရှိ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး နိုငျငံတကာလကျရှေးစငျဘဝမှ အနားယူပွီဖွဈကွောငျး တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ ခြီလီကှငျးလယျဖနျတီးရှငျ ဗီဒယျကို လကျရှေးစငျအသငျးမှာ ဆကျလကျတှနေို့ငျမလားဆိုတာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ကွစို့ရဲ့။
အာတူရိုဗီဒယျ (Arturo Vidal)
၅။ အနျတိုနီယိုဗလငျစီယာ (Antonio Valencia)
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျကလပျနဲ့ အီကှဒေေါအသငျးတို့ရဲ့ ညာတောငျပံကစားသမား အနျတိုနီယိုဗလငျစီယာ (Antonio Valencia) ကိုလညျး ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ မွငျတှရေ့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဗလငျစီယာ ကစားနတေဲ့ အီကှဒေေါအသငျးဟာ တောငျအမရေိကနျဇုနျခွစေဈပှဲမှာ အဌမနရောသာ ရရှိခဲ့တဲ့အတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားဝငျခှငျ့ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ဗလငျစီယာရဲ့ခွစှေမျးတှကေို မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျမှာသာ ဆကျလကျရှုစားကွစို့ရဲ့။
အနျတိုနီယိုဗလငျစီယာ (Antonio Valencia)
၆။ ဒေးဗဈအယျလာဘာ (David Alaba)
ဘိုငျယနျမွူးနဈကလပျမှာ ခွစှေမျးပွနတေဲ့ ဒေးဗဈအယျလာဘာ (David Alaba) ဟာ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ ပါဝငျခှငျ့ရတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ သွစတီးယားအသငျးနဲ့ ပါဝငျကစားနတေဲ့ ဒေးဗဈအယျလာဘာဟာ ခွစေဈပှဲမအောငျခဲ့တာကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို တီဗှီကနပေဲ အားပေးရတော့မှာပါ။
ဒေးဗဈအယျလာဘာ (David Alaba)
ဒါ့အပွငျ ဘော့ဈနီးယားတိုကျစဈမှူး အီဒငျဒီဇီကို (Edin Dzeko) ၊ နယျသာလနျ ကှငျးလယျခံစဈ ဒါလဘေလိုငျး (Daley Blind) ၊ စလိုဗေးနီးယား ဂိုးသမား ဂနျြအော့ဘလကျ (Jan Oblak) နဲ့ အမရေိကနျ ဂိုးသမား တငျဟောငျးဝဒျ (Tim Howard) နာမညျကြျောတှကေိုလညျး ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ပါဝငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
အီဒငျဒီဇီကို (Edin Dzeko)
နောကျပွီးတော့ ခရိုရေးရှား ကှငျးလယျလူ လူကာမိုဒရဈ (Luca Modric) ၊ ခရိုးရေးရှား ကှငျးလယျလူ အီဗနျရာကီတဈ (Ivan Rakitic) ၊ အီတလီဂိုးသမား ဘူဖှနျ (Buffon) ၊ အီတလီနောကျခံလူ ခြီလီနီ (Chiellini) တို့လို နာမညျကြျောတှေ ဦးဆောငျတဲ့ လကျရှေးစငျအသငျးတှကေ အုပျစုဒုတိယနရောသာ ရခဲ့တဲ့အတှကျ Play – Offs မှာ အနိုငျရမှသာ ခွစေဈပှဲအောငျမှာမို့ ကမ်ဘာ့ဖလားပှဲမှာ တှမွေ့ငျရဖို့ ၅ဝရာခိုငျနှုနျးပဲ ရှိပါသေးတယျ။ ရုရှားနိုငျငံမှာ ကငျြးပမယျ ၂ဝ၁၈ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဘယျကစားသမားက ခွစှေမျးပွမယျထငျလဲ။
by Sandy Nwet .3hours ago
ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေတဲ့ တော်ဝင်မင်းသားလေးရဲ့ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာဓါတ်ပုံများ
by Ei Ei .5hours ago
ထိုင်းကလေးတွေကယ်ရင်း သေဆုံးသွားတဲ့ ရေငုပ်သမားအတွက် ဇနီးသည်ရဲ့လွမ်းချင်း
by Htet Htet .3days ago
by Kyaw Soe Aung .3days ago
Smokey Eye နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး Hollywood Celebrity ၅ဦး
by Ei Ei .3days ago
လူသားတွေကို အာကာသထဲလွှတ်တင်ဖို့ ပိုနီးစပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ SpaceX
အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးနဲ့ အတည်ငြိမ်ဆုံး လှနေပြန်တဲ့ မမ ‘မိုးဟေကို’
Hazard အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ပေါင်သန်း(၂၀၀)ရရင် ရီးယဲလ်ကို ရောင်းချသွားဖို့ရှိနေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
ပြင်သစ်အသင်းက နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ ကစားသမားများ